Inona no atao hoe deworming? | Noti saka
Ny volontsika dia mety hisy fiantraikany amin'ny andiana bibikely, toy ny parasy na kongona, fa koa ny katsentsitra ao anatiny toy ny kankana amin'ny karazany toxocara cati. Ho an'ny fiarovana anao sy ny fahasalamanao, tena ilaina tokoa ny mandamina azy indraindray, toy ny raha tsy izany dia azonay notandindomin-doza ny ainao.
Noho izany, manazava izahay inona ny deworming ary ahoana no fomba anaovanao azy.
1 Inona no atao hoe deworming?
2 Rahoviana ianao no afaka mamoaka saka?
3 Impiry ianao no tsy mila mamorona saka?
3.1 Fanala deworming ivelany
3.2 Fanala deworming ao anaty
4 Deworming amin'ny saka kely sy saka lehibe
5 Ahoana no ahalalako raha kankana ny saka?
5.1 Fleas sy kankana
6 Salama ve ny saka apetrako?
Deworming no fanesorana ny katsentsitra amin'ny zavamananaina, amin'ny tranga ankehitriny, ny saka. Misy karazany roa:
Fanala deworming ivelany: manala ny katsentsitra ivelany, izany hoe ireo izay miraikitra amin'ny hoditra hatrany, toy ny mite, parasy, kongona, kiso.
Fanala deworming ao anaty: manala ny katsentsitra anatiny, izany hoe ny kankana sy ny kankana.
Rahoviana ianao no afaka mamoaka saka?
Raha vao naka na naka zanak'akanjo ianao dia tokony ho fantatrao fa raha tsy efa nahazo fitsaboana antiparasite izy dia azo inoana fa manana katsentsitra anatiny sy angamba ivelany. Ka, tsara kokoa ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hanome anao syrup (Raha any Espana ianao dia mety hanoratra Telmin Unidia izy, izay tsy maintsy homenao mandritra ny 5 andro ary indray aorian'ny tapa-bolana) ary tsifotra antiparasitika, ny Frontline no atoro azy mafy satria azo ampiharina aorian'ny 2 andro eo amin'ny fiainana.
Impiry ianao no tsy mila mamorona saka?
Fanala deworming ivelany
Ny fampiasana pipetite antiparasite, sprays ary / na collars dia asaina manomboka amin'ny lohataona ka hatramin'ny faramparan'ny fahavaratra / am-piandohan'ny fararano, indrindra raha mivoaka any ivelany ilay biby.
Fanala deworming ao anaty
Mba hanafoanana sy / na hisorohana ny fidiran'ny katsentsitra anatiny dia tokony omena ny syrup na pilina antiparasite izay atolotry ny mpitsabo biby. 15 andro alohan'ny vaksiny tsirairay ary indray mandeha isam-bolana indray mandeha.
Deworming amin'ny saka kely sy saka lehibe
Rehefa raisina an-tanan-droa dia noraisina ary raha fintinina, rehefa niditra ho mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana ny saka dia tena mahaliana! Ary tsy ho an'ny ambany. Ny saka dia zavaboary mahatalanjona izay hanatsara ny fiainanao ... Saingy ilaina ny manaloka azy ireo araka ny nohazavainay etsy ambony. Na izany aza, mitovy amin'ny saka lehibe ihany ve ny mitovy amin'ny an'ny saka kely kokoa? Andao hojerena.
Kittens. Ny fitsaboana voalohany dia tokony hatomboka rehefa feno 3 herinandro izy ary avy eo araka ny torolalan'ny mpitsabo biby. Raha vantany vao vita ny fitsaboana voalohany, ny tolo-kevitra dia ny hanala ny saka indray mandeha isam-bolana mba hisorohana ny kankana ao am-po na ny tsinay. Ny mpitsabo anao dia tsy maintsy manao fanaraha-maso tsara sy manitsy ny fitsaboana arakaraka ny fivoaran'ny zanakao kely.
Saka olon-dehibe. Rehefa olon-dehibe ny saka, ary efa natokafokao tamin'izy mbola kely, dia tokony hahazo fisorohana isam-bolana ny saka malalanao mandritra ny taona. Ankoatr'izay dia tokony hatao in-2 na in-3 isan-taona ny fitsapana an-tady, arakaraka ny fomba fiainan'ny saka, na hiala ny trano izy na tsia, sns. Raha mandray saka olon-dehibe ianao dia mila mitondra azy avy hatrany any amin'ny mpitsabo biby mba hamelomana azy sy hijery ny fahasalamany.
Saka iray vao tonga tao an-tranonao. Na firy taona na firy ny saka, dia tsy maintsy entinao any amin'ny mpitsabo biby aloha izy mba hijerena ny fahasalamany ary hampidirina am-baravarana haingana araka izay azo atao. Avy eo dia hiankina amin'ny toetry ny fahasalamana izany, ny dokoteranao dia mety hanome soso-kevitra ny hamoahana azy indray mandeha isam-bolana na haingana kokoa, miankina amin'ny fahitany ny fahasalaman'ny saka.
Ahoana no ahalalako raha kankana ny saka?
Rehefa manana kankana ny saka dia matetika tsy misy soritr'aretina hita maso. Na dia indraindray aza azonao atao ny mahita kankana fotsy ao anaty seza na mandoa. Toy ny atody aza izy ireo toa ny vary fotsy.
Rehefa saka ny manana aretina kankana mafy Izy io dia mety miteraka soritr'aretina isan-karazany: mandoa, mivalana, mampihena ny lanja, ary manaintaina ny vozony. Na dia saka kely aza dia mety manana olana amin'ny fitomboana na kibo mivonto.
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy mandeha haingana any amin'ny mpitsabo biby ianao mba hahitana ny tranga manokana an'ny saka ary toy izao afaka mitsabo ny fepetra amin'ny fomba haingana sy mahomby indrindra azo atao.
Fleas sy kankana
Ny saka izy ireo koa dia afaka mahazo kankana amin'ny atody parasy mety voan'izy ireo ary voan'ny aretina. Izany no antony maha zava-dehibe ny fikarakarana saka parasy faran'izay haingana ihany koa hisorohana azy ireo raha tsy ananany. Tokony hatao tsy tapaka izany, indrindra raha tratra eny an-dalana ny saka na mandeha mitsangatsangana any ivelany matetika.
Zava-dehibe izany hatao tsy tapaka ankoatry ny deworming. Raha tsy izany dia hitombo hatrany ny parasy sy ny kankana ary hipetraka ao amin'ny vatan'ny ombilinao ary ho tratry ny aretina izy ary ny zavatra ratsy indrindra dia mety hipoka anao koa izy io. Noho izany Zava-dehibe tokoa ny fitazonana hatrany ilay lahin-jaza malalanao salama tsara.
Salama ve ny saka apetrako?
Raha te hahalala raha salama ny saka anao na tsia, dia miankina amin'ny lafin-javatra maro, tsy hoe raha natelina na tsia. Tsy maintsy manana sakafo tsara izy io mba hitomboany matanjaka sy hahasalama, hitazomana hetsika isan'andro (milalao amin'ny saka), hatory tsara, fikarakarana vatana, fa tsy ampy ny vaksiny ... holazain'ny fihetsiky ny saka anao raha salama na tsia. izany fihetsika miasa izany dia hampiseho aminao fa tsy maninona ary Ny fihetsika tsy misy lisitra loatra dia mety hahatonga anao hitebiteby.
Tsy maintsy jerena ny hoditr'izy ireo sy ny palitao mba hahafantaranao fa mandeha tsara ny zava-drehetra. Raha misavoritaka ny hoditra, sola, na simba ny hoditra, dia mety ho olana tokony hijerena ny mpitsabo ny biby.
Mitovy amin'ny parasy, zahao raha manana parasy ianao na tsia. Raha te hahalala dia jereo ny tain-drorohany ary raha misy teboka mainty dia mando ilay seza izy ary raha mivadika mena dia manana parasy izy.
Na izany na tsy izany, ny zava-dehibe dia izay raha mahita endrika hafahafa ao amin'ny saka ianao dia aza miandry fotoana hahalasa azy na "mandalo irery". Zava-dehibe ny itondranao azy any amin'ny mpitsabo biby mba hahalalanao raha misy fepetra mila fitsaboana.
Amin'ireto toro-hevitra ireto dia alao antoka fa hanana fahasalamana tena tsara ny volonay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Inona no atao hoe deworming?